Etu ị ga-esi bulie igwe kwụ otu ebe nri-News & Ihe omume-Deltọ Ọtọ (Changzhou) Ebike Co., LTD
Mgbe Sale Servies
>lọ>News & Ihe
Etu ị ga-esi họrọ igwe ibu ibu
Oge: 2021-03-23 Hits: 20
Ọ bụrụ na ịchọrọ ịkpọrọ ụmụ gị site na Point A ruo Point B, mana ịnweghị ike itinye ha na igwe kwụ otu ebe gị, enwere ọtụtụ nhọrọ iji nyere gị aka. Iji nweta ngwongwo site n'otu ebe ruo ebe ọzọ, ọ bara uru ịtụle igwe kwụ otu ebe.
E nwere ọtụtụ cargobike dị iche iche. Na mkpokọta, enwere ọdụ ogologo ogologo, ịnyịnya ígwè atọ, ụdị ịnyịnya atọ ndị ọzọ, yana "minivan." Ha niile nwere ahịa dị iche iche wee dịgasị iche na ọnụahịa. Ọ dị mfe ịnya maka ịzụ ahịa kwa izu gị.
O nwekwara ike ịbụ ihe amamihe dị na ịhọrọ otu ụdị, nke gụnyere ụgbọ ala ọrụ bara uru n'ezie: etiti azụ, fenda, igbe yinye, okwuchi windo, wdg na breeki kwesịrị ichebe nke ọma na ihe ndị a, na obere etiti ga-eme ka ịbanye na ịwepụ mfe mgbe a na-ebu ya.
Ma, ihe mbụ ị ga-eme bụ ịchọpụta ihe ị na-ebu: obere nwa? Mụaka ndị okenye? Anothermụaka ọzọ? Ma ọ bụ ibu? Kedu ụdị ngwongwo? Yabụ, ogologo oge ole ka njem gị ga-ewe? obere nwayọ nwayọ?
Ọ dị ezigbo mkpa iche echiche banyere ebe ị ga-etinye ya ma nwee ezigbo echiche nke mmefu ego gị kachasị elu ma cheta iburu n'uche ọnụahịa nke ngwa dị ka mkpuchi, oche ụmụaka na mkpọchi dị elu.
Ndụmọdụ kachasị mma bụ ịnwale ụdị ole na ole, lee ka ha si ele gị anya, ma hụ ikike ha nwere n'ezie. Lelee oke ibu, gụnyere ndị njem na ụgbọ ala, na ibu. Ọ bụrụ na ị nwere enyi ma ọ bụ onye agbata obi gị nwere otu, nke ahụ bụ Ezigbo: gbalịa nke ha ma jụọ ha banyere ahụmịhe ha. Lee ihe ndị na-eme ka ndụ gị dịkwuo mfe, dịka ebe a na-azọda ụkwụ, ihe nkwado ndị e jikọtara ọnụ, na ngwa ndị mara mma nke dabara na mkpa gị.
You ga-achọpụta na n’agbanyeghi ụdị ụgbọ ala ị na-ahọrọ, ọ ga-eme ka ndụ gị ka mma.
PREV: Kedu ihe kpatara ịhọrọ OTKARGO electrice cargo bike
OSOTE : Dị-Ntụkwasị Obi-Mbụ
© 2020 Transport Delight (Changzhou) Ebike Co., LTD Ikike niile echekwabara.
Adress: Room 601, Nke 333, Hanjiang Road, Xinbei district, Changzhou, Jiangsu n'ógbè, 213000, China
Ekwentị: + 86-0519-85182790
Ozi: [email protected]